At least … ၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅ – မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၇နာရီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Myanma News » At least … ၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅ – မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၇နာရီ	21
Posted by မြစပဲရိုး on Sep 21, 2015 in Myanma News | 21 comments
At least I can see her so graceful face.
အဝေးရောက်သား သမီးများ ဒီလောက် ဝိုင်းကြည့်နေမှတော့ အဝိုင်းလည် ပြီးထစ်နေတာ မဆန်းလောက်ဘူး ထင်ရဲ့။ ဒါနဲ့ဘဲ ၁၅မိနစ် ကုန်တော့မယ်။ နောက်မှဘဲ replay ပြန်ကြည့်ပါတော့မယ်။ အခု တော့ မျက်နှာလေးကြည့်ပြီး ကျေနပ်နေပါတယ်။
မြစပဲရိုး says: အမ် …..
အဝိုင်းလည်တာ စောင့်ကြည့်ရင်း နဲ့ ဖြတ်ကနဲ “မြန်မာ့အမျိုးသား ကွန်ဂရက်” ဆိုပြီး ပင်နီ နဲ့ ခွပ်ဒေါင်းလိုဂိုနဲ့ နောက်တစ်မျိုး ထွက်လာတယ်။
ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ အမှတ်အသား ကို တောင်မှ သူများ နဲ့ ကွဲ အောင် မလုပ်နိုင်သူများ ရေ – အားနာပါရဲ့။
ကိုယ့်အချိန် က “ကိုယ့် ဘုရင်မ” အတွက်သာ တမင်ပေးထားတာမို့ Bye Bye ပါ။
Ma Ma says: ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်တွေဆိုရင်တောင် ကိုယ့်အမှတ်တံဆိပ်ကို သူများနဲ့မတူအောင် လူအများမှတ်မိအောင် ထင်ရှားကွဲပြားအောင် လုပ်ကြရတာ၊ ပါတီအမှတ်တံဆိပ်ကို သူများနဲ့ဆင်တူရိုးမှားလုပ်နေကြတာ တမျိုးကြီးပဲ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: same here!!
မြစပဲရိုး says: * အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရေဒီယို/တီဗွီ မိန့်ခွန်း
ပထမဦးစွာ တိုင်းသူပြည်သားအားလုံး ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ ဆုတောင်း လိုက်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့ကျရောက်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမဲတွေကို တောင်းခံတာ ဖြစ်တာကြောင့် ပြည်သူကို ကျွန်မတို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မူဝါဒသဘောတရားများ၊ နိုင်ငံ့အတွက် မျှော်မှန်းချက်များနဲ့ သမိုင်းဖြစ်စဉ်အချို့ကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်ရာမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ကဏ္ဍဟာ အဓိကပါပဲ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒ၊ သြဇာ၊ အာဏာအပေါ်အခြေခံတဲ့စနစ်ဖြစ်တာကြောင့် ပြည်သူတွေ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ကြမှ အောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ ပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုလိုအပ်သလို၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ပွင့်လင်း ထင်ရှားတဲ့၊ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှတဆင့် ဖေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ပြည်သူ့ ဆန္ဒကို လေးစားလိုက်နာပါ့မယ်လို့ အာမခံပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို (၁၉၈၈) ခုနှစ်မှာ၊ လူ့အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းမယ့် စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ ရည်မှန်းချက်များနဲ့ ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်အောင် ကြိုးပမ်းရာမှာ အကြမ်းမဖက်ရေး၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး၊ သဟဇာတဖြစ်ရေး၊ အာဃာတကင်းစင်ရေး စတဲ့ သဘောတရားများကို ခိုင်ခိုင်မာမာစွဲကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (၂၇) နှစ်အတွင်း အခက်အခဲပေါင်းစုံကို အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရပေမယ့် ဒီမူဝါဒ သဘောတရားတွေကို လုံးဝလက်မလွှတ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုလည်း ကျွန်မတို့နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ ပြောင်းလဲနိုင်ရေး အတွက် ဒီမူဝါဒသဘောတရားတွေအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မထိ၊ ပြည်သူမနာတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့သာ ဒီမိုကရေစီဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကြီးကို ပြည်ထောင်စုသားအားလုံးနဲ့အတူ ပူးပေါင်းလက်တွဲ အကောင်အထည် ဖော်လိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ (၁၉၉၀) ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လူထုရဲ့ တစ်ခဲနက်ထောက်ခံမှုကို ရရှိခဲ့ပေမယ့် တိုင်းပြည် တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခွင့်မရခဲ့ဘူး ဆိုတာ အများသိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း (၁၉၉၀) ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆန္ဒကို ဖေါ်ထုတ် လိုက်တာကြောင့် ကျွန်မတို့နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့အတူ အဖွဲ့ချုပ်ပါ ဆက်လက် ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို မမေ့မလျော့ တန်ဖိုးထားလျက်ပါ။
(၂၀၁၂) ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာကလည်း၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ နိုင်ငံအတွက် မျှော်မှန်းချက်တွေကို တတ်အားသရွေ့ အေးချမ်းစွာ ဥပဒေဘောင် အတွင်းက ဖော်ဆောင်ဖို့ရာ ကြိုးပမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ပြည်တွင်းငြိ်မ်းချမ်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့ကို၊ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဦးတည်ချက်များအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ ပါတယ်။ ပြည်သူရဲ့ ယုံကြည်ထောက်ခံမှု ကျေးဇူးကြောင့် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ မဲဆန္ဒနယ် (၄၄) နေရာ အနက် (၄၃) နေရာမှာ အနိုင်ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ် (၆၀၀) ကျော်ပါဝင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ (၄၀) ကျော်မျှသော ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်အားဟာ အကန့်အသတ်နဲ့သာ ရှိနိုင်မယ်ဆိုတာ ပြည်သူများ နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအကျိုး၊ ပြည်ထောင်စု အကျိုးအတွက် လွှတ်တော်အတွင်း သာမက၊ လွှတ်တော်ပြင်ပမှာပါ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ကြိုးပမ်းခဲ့မှု များကြောင့် ပြည်သူပြည်သားများ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဘာကြောင့် လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို ပိုမိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနားလည် ခဲ့ကြတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ (၂၀၁၂) ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ဦးတည်ချက်များကို ထိထိ ရောက်ရောက် အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ကတော့ အစိုးရ တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ပိုင်ခွင့် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတာဝန်ကို ပြည်သူလူထုက အပ်နှင်းပေးစေ လိုတာကြောင့် ယခု (၂၀၁၅) ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မှာပါ။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဟာ ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ ဥပဒေများဟာ တရားပြီး အများပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀ လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ဖျက်တန်ရာဖျက်၊ ပြင်တန်ရာပြင်၊ အသစ်ပြဌာန်းတန်ရာ ပြဌာန်းဖို့လိုပါတယ်။ တရားဥပဒေများ ထိရောက်မှု ရှိစေရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကတော့ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ တရားစီရင်ရေး ဆိုင်ရာ တို့မှာသာရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်တာက အစိုးရသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရေးဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဦးတည်ချက် အောင်မြင်ဖို့အတွက် အဓိကကျ ပါတယ်။
(၂၀၁၂) ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဦးတည်ချက်များကိုတင်ပြ ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်း စစ်ရပ်စဲသွားဖို့ အတွက် အဆင့် (၃) ဆင့်နဲ့ ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်း၊ ပထမအဆင့်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ဒုတိယအဆင့်မှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပပြီး ညှိုနှိုင်းအဖြေရှာရေး၊ တတိယအဆင့်မှာတော့ ပင်လုံအခြေခံမူဖြစ်တဲ့ တန်းတူညီမျှမှု၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် စသည်များကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက အာမခံရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဖြစ်မြောက်စေရန်အတွက် သဘောတူညီစာချုပ်ကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများ မကြာမီကာလအတွင်း လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မဲ့ အလားအလာရှိနေတာကြောင့် ပြည်သူပြည်သားတွေ ၀မ်းသာစွာ စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။ ဒီအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ်ဟာ အပြန်အလှန်နားလည်မှု၊ အပြန်အလှန်လေးစားယုံကြည်မှု တို့ပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့၊ တည်တံ့ခိုင်မြဲမဲ့ သဘောတူညီချက်ဖြစ်ဖို့ရာက အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် အောင်မြင်စွာသဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အခါမှာ၊ ဒီမိုကရေစီ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းစေဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ် ချခြင်းဖြစ်တဲ့ ဒုတိယအဆင့်နဲ့ တတိယအဆင့်တို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ရပါမယ်။ တကယ်တော့ ဒီအဆင့်နှစ်ဆင့်ကို တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်သွားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာကတော့ နိုဝင်ဘာလ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှ ထွက်ပေါ်လာမဲ့ အစိုးရပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူကလိုလား ထောက်ခံခဲ့ရင် ဒီတာဝန်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ထမ်းဆောင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေး ရည်မှန်းချက်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၇) နှစ် အတွင်း အန္တရာယ်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ ကြုံတွေ့ရပေမယ့် လုံးဝလက်မလွှတ်ခဲ့ပါ။ (၂၀၁၀) က စပြီး ကျွန်မတို့ အဖွဲ့ချုပ်က ဒုတိယပင်လုံ ညီလာခံကျင်းပရေးကို ဦးတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ `ဒုတိယပင်လုံ´ ဆိုတာ ကတော့ ပင်လုံစိတ်ဓါတ်ရဲ့ အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့၊ တိုင်းရင်းသားများ ဗမာများအပါအ၀င် အားလုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာ ဘုံမျှော်မှန်းချက်များကို အောင်မြင် အေးချမ်းစွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်အပေါ် အခြေခံတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြည်ထောင်စုရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ဆိုလိုတာပါ။
ယခုတစ်နိုင်ငံလုံး၊ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အားလုံးမကျန်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ ၀င်ရောက်အရွေးခံတာဟာ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်လာရေး အတွက်၊ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်နဲ့ ပြည်ထောင်စုညီညွတ်မှုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မယ့် ဗဟိုအစိုးရ ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုအစိုးရဟာ အမှန်တကယ် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းစံထားများနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိပြီး၊ တိုင်း၊ ပြည်နယ်အစိုးရများနဲ့ ဟန်ချက်ညီညီ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို တည်ထောင်နိုင်မှာပါ။ မတူကွဲပြားမှုကို အင်အားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး၊ ညီညွတ်မှု ကြိုးစားဖော်ဆောင် နိုင်ခွင့်ကို အဖွဲ့ချုပ်က ပြည်ထောင်စုသား အားလုံးထံက တောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာ အချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံ့ရဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုလုံး အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ သဘောတူညီမှုများကို အဆောတလျင် မရယူပဲ၊ အသေအချာတိုင်ပင် ဆွေးနွေး အဖြေရှာတာဟာ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်ပါ။ သို့သော်လည်း အကန့်အသတ်မရှိ အချိန်ဆွဲနိုင်တဲ့ အနေအထားမဖြစ်ဖို့လည်း အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲတွေက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သဘောတူညီမှုတွေကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒုတိယအဆင့်လို့ သတ်မှတ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲများနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် တတိယအဆင့်လို့ သတ်မှတ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင် ပြောင်းလဲရေးကိုလည်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရာမှာ တပ်မတော်ရဲ့ကဏ္ဍက အဓိကဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကျွန်မတို့ ပြည်သူပြည်သားများ အသိဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အမြင်နဲ့ တပ်မတော်ရဲ့အမြင်ဟာ တစ်ထပ်တည်း မဟုတ်ဖူးဆိုတာလည်း ပြည်သူ ပြည်သားများ အသိဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီမိုကရေစီ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ အနာဂတ် တည်ငြိမ်တောက်ပရေးကို လိုလားတဲ့ နေရာမှာ တပ်မတော်နဲ့ ကျွန်မတို့အကြား လုံးဝကွဲပြားမှု မရှိဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ပြည်သူတွေနဲ့ ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့ တပ်မတော်ကို ပြည်သူ့ အကျိုးကိုသာ ဦးတည် ဆောင်ရွက်တဲ့ ပြည်သူချစ် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပြည်သူပြည်သားများက ပြင်းပြစွာ မြင်လို နေကြပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ထွက်ပေါ် လာမယ့် ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လေးစားကာကွယ်ရေးများ အပါအ၀င် နိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာ ဖန်တီးရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စအဝဝမှာ ပြည်သူနဲ့ တပ်မတော် တစ်သားတည်းရှိဖို့ကို လေးလေးနက်နက် လိုလား နေကြပါတယ်။
အဖွဲ့ချုပ်ဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ဒီမိုကရေစီစံနှုန်း စံထားများနဲ့ အညီ၊ တိုးတက်ခေတ်မီ ပြည့်စုံစွာ ပြည်သူတွေလေးစားချစ်ခင်မှုကြောင့် ကမ္ဘာ့အလယ် တင့်တယ်တဲ့၊ နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူ လွတ်လပ်၊ လုံခြုံ၊ အေးချမ်းရေးတို့ကို အခိုင်အမာ ကာကွယ်ပေးမယ့်၊ နိုင်ငံက အားကိုးရတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်စေလိုပါတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ တပ်မတော်အကြား သံသယတွေ ဖယ်ရှားပြီး ပြည်ထောင်စုအရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အပြန်အလှန် ယုံကြည်လေးစားစွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲရေးမှာလည်း နိုင်ငံရဲ့ တည်ငြိမ်မှု၊ ပြည်သူတွေရဲ့ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းမှုတို့ကို မထိခိုက်စေပဲ ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ ကိုက်ညီစွာ အတူလုပ်ဆောင်ချင်ပါတယ်။
အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ပြည်သူပြည်သားအားလုံး အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာ ရှင်သန်ပြီး၊ လွတ်လပ် လုံခြုံစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ထူထောင်ချင်ပါတယ်။ (၂၇) နှစ်ကျော် အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ပါတီဟာ၊ နိုင်ငံ့ အစိုးရတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိနိုင်ပါ့မလားလို့ အချို့က စောဒက တက်ပါတယ်။ ရှိနိုင်ရုံမက၊ ရှိကိုရှိပါတယ်လို့ ကျွန်မ ရဲရဲကြီးပြောဝံ့ပါတယ်။ တာဝန်တစ်ရပ်ကို ကျေပြွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် အသိနှစ်ရပ်လိုအပ် ပါတယ်။ ဘာကိုမလုပ်သင့်၊ ဘာကိုလုပ်သင့်ဆိုတဲ့ အသိနှစ်ရပ်ပါပဲ။ ဘာကိုမလုပ်သင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၅၀) အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အတောက်ပဆုံး ကြယ်အဆင့်မှ မှေးမှိန် သေးသိမ်တဲ့ မထင်မရှား ဂြိုလ်လေးအဖြစ် ရောက်ရှိသွားစေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကိုလေ့လာပြီး သင်ခန်းစာတွေ အများကြီးရနေပါပြီ။ ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကတော့ ပြည်သူတွေက သင်ကြား ပေးလို့ သိနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ (၂၀၁၅) ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်းမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဘဝတွေ ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရန် ရည်မှန်းချက်များကို ကဏ္ဍလေးရပ် ခွဲပြီးတင်ပြထားပါတယ်။
(၁) တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး
(၂) တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံး အေးချမ်းလုံခြုံစွာ လက်တွဲနေထိုင်ရေးကို အာမခံချက်ပေးနိုင်မည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းရေး
(၃) ပြည်သူလူထုအား တရားမျှတစွာ အကာအကွယ်ပေးမည့် အုပ်ချုပ်မှုစနစ် တစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာရေး
(၄) လွတ်လပ်လုံခြုံစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
ဒီရည်မှန်းချက်အားလုံးကို သတ်မှတ်ရာမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ အသံတွေနားထောင်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ မျက်နှာတွေကြည့်ပြီး၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒတွေအပေါ် အခြေခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ပြည်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးခွင့် ရခဲ့ရာမှ ပြည်သူတွေရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ အခက်အခဲတွေ၊ မျှော်လင့်တောင့်တ ချက်တွေကို ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။
အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ လွတ်လပ်လုံခြုံစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍ အောက်မှာ စီးပွားရေး၊ တောင်သူ လယ်သမား၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း၊ အလုပ်သမား၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စသဖြင့် အပိုင်း (၁၂) ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ ပြည်သူများရဲ့ အဓိက လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဦးတည်တဲ့ မူဝါဒ၊ စီမံကိန်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ငံရေးပါတီ (၉၀) ကျော် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီတိုင်းဟာ မိမိတို့ရဲ့ သဘောထားရည်ရွယ်ချက်တွေကို နိုင်ငံသိ တင်ပြပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကို တောင်းယူ ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်ခံမှု တောင်းဆိုတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်မှုကို တောင်းဆို တာပါပဲ။ ဘယ်ပါတီကို ယုံကြည်ထောက်ခံ ရမယ်ဆိုတာကို ပြည်သူတွေက ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပြည်သူတွေရဲ့ စစ်ဆေး သုံးသပ်ချက်ကို ရဲရဲ ခံနိုင်ပါတယ်။
အဖွဲ့ချုပ်ဟာ မည်သည့်အခါကမှ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူ ထိခိုက်နစ်နာအောင် မလုပ်ခဲ့ပါ။ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ နိုင်ငံရေးအရ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ နေရာမှာ စဉ်းမျဉ်းစည်းကမ်းဘောင်အတွင်းက အစဉ်လုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ မတရားမှုများကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆန့်ကျင်ခဲ့သော်လည်း မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်းကိုမှ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဘောင်ကို ကျော်လွန်ပြီး တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုခဲ့ပါ။ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ပြည်သူကို ပေးတဲ့ ကတိကဝတ်တွေ မည်သည့်အခါကမှ မချိုးဖောက်ခဲ့ပါ။ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ပြည်သူကို လိမ်လည်လှည့်ဖြား၍ သော်လည်းကောင်း၊ ခြိမ်းခြောက်၍သော် လည်းကောင်း၊ စည်းရုံးဆွဲဆောင်ခြင်း မပြုခဲ့ပါ။
၁၉၈၈ ခုနှစ် စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က စပြီး ယခုတိုင် ပြည်သူကိုလေးစား ပွင့်လင်းစွာ ဆက်ဆံခဲ့သည့် အတိုင်း ဆက်လက်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားမည်မှာ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ သန္နိဌာန် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အပ်နှင်းတဲ့ တာဝန်ကို ဖြောင့်မတ်စွာ အကောင်းဆုံးထမ်းဆောင် ဖို့က အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ အသက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မဲ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှ တစ်ဆင့် ပြည်သူများက အဖွဲ့ချုပ်ကို အစိုးရတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ချက် ချပေးစေ ချင်ပါတယ်။ ဒီလိုတာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့် ရခဲ့လျှင်၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး၊ သဟဇာတ ဖြစ်ရေး၊ အာဃာတ ကင်းစင်ရေးမူများကို အစဉ်တစိုက် နှလုံးသွင်းပြီး ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကြီး ထွန်းကားရေး အတွက်၊ မည်သူ့ကိုမှ ရန်သူသဖွယ် မသတ်မှတ်၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများကို လက်ကမ်း ကြိုဆိုကာ အတူလုပ်ဆောင်သွားဖို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ခံယူထားပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ပြည်သူများရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေးစား လိုက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာ ကြပါစေ။ ဘေးအန္တရာယ် အပေါင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။ ကောင်းကျိုးလိုရာ ဆန္ဒ အ၀၀နှင့် ပြည့်နိုင်ကြပါစေ။
@QUIL@ says: ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ ဆုတောင်းရင်တော့…
မဟုတ်မှလွဲရော ဆားတို့ကျောင်းထွက်များ မိန့်ခွန်းရေးပေးသလားမဆိုနိုင်..
မြစပဲရိုး says: မနေ့ က စလို့ ဒီနေ့ အထိ FB page တွေမှာ “ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ” တွေ နဲ့ သဲသဲလှုပ် နေတဲ့ သူတွေ ကို ကျောင်း တစ်ကျောင်း ရဲ့ ပွဲ တစ်ခု မှာ တွေ့ပါတယ်။
သိပ်ပိုတာဘဲ၊ သိပ်သဲတာဘဲ။ မပြောလိုပါလေ။
သူများထက် ထူးခြားစွာ အရာရာမှာ သာလို့ ဘဲ သဲသဲလှုပ် ဂုဏ်ယူနိုင်တာပေါ့။
ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ပါစေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Words of the day
(၂၇) နှစ်ကျော် အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ပါတီဟာ၊ နိုင်ငံ့ အစိုးရတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိနိုင်ပါ့မလားလို့ အချို့က စောဒက တက်ပါတယ်။
ရှိနိုင်ရုံမက၊ ရှိကိုရှိပါတယ်လို့ ကျွန်မ ရဲရဲကြီးပြောဝံ့ပါတယ်။
တာဝန်တစ်ရပ်ကို ကျေပြွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် အသိနှစ်ရပ်လိုအပ် ပါတယ်။
ဘာကိုမလုပ်သင့်၊ ဘာကိုလုပ်သင့်ဆိုတဲ့ အသိနှစ်ရပ်ပါပဲ။
kai says: ဒေါ်စုက..လူတွေအသံတော့နားထောင်နေပုံရသဗျ..။
သိတော့သိသား..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: .ပြောရက်လိုက်တာ သူကြီးရယ်။
ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ တစ်ချိန်လုံး တွေးနေခဲ့တယ်လား။
ကျွန်မ ပြောသားဘဲ။ သူ ကျွန်မတို့ ပြောတာတွေ ကြားနေပါတယ်လို့။
ဇီဇီခင်ဇော် says: မေစု စကားးပြောတာကို အပြင်မှာ မြင်ဖူးးထားးတော့ မနေ့ညက ကြည့် ရင်းး တခုခု မှားးနေတယ် ထင်မိတာာ
အသက် ၇၀ မိန်းးမတစ်ယောက် ကို ဒီလောက်တွေ ထိ ယုတ်ကန်းးတဲ့ ယောင်္ကျားးတွေ ဒီနိုင်ငံမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ အတော် ရှက်စရာကောင်းးတယ်.. ——-
အမြဲတမ်း တက်တက်ကြွကြွ၊ စကားပြောရင် မာန်အပြည့်ပါတဲ့ အမျိုးသမီးကြီး.. ခုတစ်ခါ မိန့်ခွန်းမှာ အဲသလိုမာန်တွေ ဟန်တွေ မရှိသလောက် နည်းသွားအောင် ရိုက်ကူးရေးက ပညာပြထားမှန်း ခုမှ သိရတယ်.. သတင်းကြေညာသူတွေအတွက် စာကို ကြည့်ပြီး ဖတ်လို့ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ စက်ကို ဟိုလှည့် ဒီလှည့် ဖက်ရ မခက်ခက်အောင် လုပ်သတဲ့.. အဲသလို ကြည့်ဖတ်ဖို့ဆိုတာ သတင်းကြေညာသူတွေတောင် မနည်းကျင့်ထားရတာမှာ အစိမ်းသက်သက် ဖတ်လေ့မရှိတဲ့ ဒီအသက်၇၀အရွယ် အမျိုးသမီးကြီး ပြောနေတုန်း စာတွေ ဝါးအောင် focus ပြတ်လိုက်၊ မပြတ်လိုက်ပါ လုပ်ထားသတဲ့.. စာဖတ်ရခက်သွားတိုင်း ဟန်မပျက်အောင် ထိန်းနေရမှတော့ ဘယ်လိုလုပ် ချောချောမွေ့မွေ့ ရှိပါတော့မလဲ.. အဲသလို စာက ဝါးနေတဲ့ကြားထဲ စက်လှည့်တဲ့သူက လှည့်တဲ့ speed မမှန်တော့ ဖတ်ရတဲ့သူမှာ စိတ်ပင်ပန်းတကြီး.. အကြည့်တွေ မမှန် အနေအထား ပုံမှန် မဖြစ်နဲ့ မနည်းထိန်းပြောရပြီပေါ့.. မျက်နှာကိုလည်း lighting တွေနဲ့ မီးမစူးစူးအောင် ထိုး.. နောက်လူတွေကျ ပုံမှန်ဆက်ဆံ.. သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝတွေ ယုတ်မာချက်.. ဒီအစိုးရနဲ့ ဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ဒီလိုအရိုးအရင်းကိုက် ဘောမတွေကြောင့် တောက် ခေါက်ရလွန်းလို့ လျှာပါ အသားမာ တက်တယ်.. သေချင်းဆိုးတွေ.. တောက်
မြစပဲရိုး says: အဲဒီသတင်း က Live လွှင့်တာ မဟုတ်တာကြောင့် သိတ်ပြီး မယုံသင့်ဘူး။
တကဲ့ source က ဘယ်က လဲ သိသင့်တယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ လစ်လျုရှူ လိုက်ပါ။
ဟုတ်လဲ မိန့်ခွန်းကို သိခိုက်လောက်အောင်မဟုတ်တာမို့ လစ်လျုရှူ လိုက်ပါ။
ဆဲကြ၊ ဆိုကြ နဲ့ ရိုင်းတာတွေကို ကြားက နေ သဘောကျနေသူတွေ ရှိပြီး သူတို့ က စဖွ တာ ဖြစ်နေဦးမယ်။
သတင်းမှား ဆိုရင် MRTV က လူတွေကို တောင်းပန်သင့်မလားဘဲ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဝှား… ပျင်းဇာဂျီး ပျဉ်းဇာကြီး…။ ဗူးလာဘ်လှဆွေအကောင့် တက်ချောင်းတာမှ အပျင်းပြေအိ..
မြစပဲရိုး says: lol:-))))
အဲဒီ ဘူးလက် စွပ်စွဲထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အားပေးသူများဟာ ပညာမတတ်၊ ထောင်ထွက်၊ နိုင်ငံရေးအချောင်သမားဒေါ်လာစား ဆိုပြီး တပ်ထားရာတဲ့ လေဘယ် တွေ ထဲ က ကိုယ်နဲ့ ကိုက်မှာကို ရွေးချင်လို့ သွားပြန်ကြည့်တော့ ဖျက်လိုက်ပြီ။
Mike says: . “မြန်မာ့အမျိုးသား ကွန်ဂရက်” ဆိုပြီး ပင်နီ နဲ့ ခွပ်ဒေါင်းလိုဂိုနဲ့ နောက်တစ်မျိုး ထွက်လာတယ်။
Kyaw Wut Hmone
ကိုယ့်မလဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အမျိုးသားရေးဆိုပြီး အမုန်းတရားပေးတာတွေ ရွံတတ်လို့ ကြိုးစားပြီး မကြည့်ဘဲ နေဦးမှဆိုပြီး နေနေရင်းကကို ဒီလူ့မြင်ဖူးသလိုပဲ။ ကြည့်လက်စနဲ့ နားထောင်လိုက်ပါဦးမယ်လေ ဆိုပြီး သွားနားထောင်မိတယ်။ အမလေး စကတည်းက ယဉ်သကို။ ယူထားတော့ logo က အများသိပါတီနဲ့ မသဲမကွဲ ဆင်တူယိုးမှား။ (ခုလို ရှေ့နောက်ပြောလိုက်တော့ အတော့်ကို ကွဲပြားသွား) ပြောပုံက လူထုကို မထီမဲ့မြင်။ ဦးထိပ်တင်တော့ ပြည်သူ့ချဉ်ပတ်။ လက်ညှိုးက ငေါက်ငေါက်ထိုး ရှေ့မှာများ လူရှိရင် လည်ပင်းတောင် ညစ်ပြီးပြောမလားထင်ရ။ ဘုရား ဘုရား ကြည့်မိတာ ပါတီတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကို စကားပြောတဲ့ အစီအစဉ်လား။ မျက်စိထဲမြင်မိတာက ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ရွာထဲကို မြင်းစီးလူဆိုးတွေဝင်လာ သေနတ်ဖောက်ပြီး ရွာသားတွေကို ဟိန်းဟောက်တာတွေပဲ သွားပြေးမြင်တယ်။ အဲဒါနဲ့ အစီအစဉ်သေချာအောင် ပြန်ကြည့်တော့လည်း အစီအစဉ်ကမမှားပါဘူး။ အေးလေ ကိုယ်ကသာအစီအစဉ် မှားတယ်ထင်နေတာ သူ့နောက်မလဲ ပါတီနာမည် နဲ့ တံဆိပ်ကြီးတောင် ပါသေး။ အင်းးးးးးးးးးးး။ ဒါက အစပဲရှိသေးတယ်။ ဒါမျိုးက မြင်သာသေးတယ်။ အမျိုးမျိုးတွေ ကပြသရုပ်ဆောင်ကြဦးမယ်။ အမျိုးသားရေး အမျိုးသားရေး စကားလုံးဟာ မဟုတ်ဘဲ သုံးပါများတော့ လူမုန်းစရာဖြစ်လာမှာတောင် စိုးပါတယ်လေ။ သူတို့က ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ရေဘဝဲလို ကျင့်နေတာ။ လက်တံတွေ လက်တံတွေခွဲထုတ်ထားတာ စုံလိုက်သမျှ လက်တံအကြီးဆုံးကြီးတခုကနေ အားလုံး လာထား နာသွားမယ်ဆိုပြီး မဲစာရင်းတွေကို ကိုင်ထားပစ်လိုက်တယ်။ နောက်လက်တံတွေက ဆက်ရံတယ်။ တစ်ခုကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ခြိမ်းခြိမ်းခြောက်ခြောက် ဟိန်းဟိန်းဟောက်ဟောက် အကောင်။ နောက်လက်တံတွေမှာတော့ အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်ပါတယ်ဆိုပြီး အမျိုးဖျောက်နေတဲ့တရားခံ အစစ်ကို သူ့ကိုယ်နဲ့ဖုံး ပြည်သူ့ဆီတော့ လှိမ့်လုံးနဲ့ရော ယူထားတဲ့အလံတွေကျတော့ အများသဘောကျတဲ့ ဒေါင်းကမချတဲ့ အလံဖြူမပါတဲ့ အယောင်ဆောင် ဒေါင်းအထွေထွေ။ ဒါတင်မက စီးပွားရေးကိုပဲ ဦးစားပေးကူမယောင် အမျိုးသားရေးကိုပဲ အလေးထားပေးနေသယောင် လူငယ်တွေကိုပဲ အားပေးတော့မယောင် ဟိုအယောင် ဒီအယောင်တွေဆောင်ဦးမယ့် ကဒေါင်းအတုတွေက တသွယ်။ ဒီကြားထဲ သံဃာမပီသူတွေက အမုန်းတရားတွေသာ တဝီဝီ ဖြန့်ဦးမယ့် လက်တံတွေက တဖုံ။ အစုံစုံသုံးထားတယ်။ အထူးသဖြင့် ရိုးသားတဲ့ကျေးလက်ကို ထုတ်သုံးမယ့် ဒီညစ်လုံးတွေ။ အဟောင်းတွေပေမယ့် သုံးကောင်းနေဦးမယ့် အောက်လုံးစကားတွေ။ လူနေရပ်ကွက်ထဲမယ် ပုဆိုးမပါ ဘာမပါ အော်ဆဲနေတဲ့အမူးသမားကိုတော့ မပေါင်းသင်းအပ်မှန်း လူတိုင်းသိသာပေမယ့် ပုတီးကလက်ထဲထား ပါးစပ်က ဘုရား ဘုရား ရွတ်တာကို လူမြင်နေတော့ ဒီလူကြီး နောက်ကွယ်တော့ လက်ကတော့ ကားယားကားယားကို ဟုတ်ပါ့မလားထင်မယ် မဟုတ်လား။ သူလိုမျိုးက အမူးသမားလို ချက်ချင်း မမြင်သာပေမယ့် နောက်ကြောင်းလေးတွေ လိုက်လိုက်ရင် ဟုတ်ကနဲနေလို့ ဟင်ကနဲ ဖြစ်ရမှာ အသေအချာပဲ။ ဘယ်သူ့မဲပေးရမလဲ မဆုံးဖြတ်ရသေးရင်တောင် ဘယ်သူတွေကို မဲမပေးရဘူးလဲတော့ မလွဲသွားရအောင် သတိထားလို့ရပြီ။ ထင်ယောင်ထင်မှားတွေ ရှာပြီး ဖယ်ချထားလို့ရပြီ။ ကိုယ့်အချင်းချင်းတွေပဲ စောင့်ကြည့်ရင် တမျိုးတည်းရယ်။ ပျင်းစရာကြီးနော်။ တကယ်ပဲ အားလုံးကို အန္တာရာယ်ပေးမယ့် လက်တံကွဲတွေ အများကြီးနဲ့ ရေဘဝဲကြီးကိုလည်း မျက်စိဒေါက်ထောက်လေး ကြည့်ပေးနေကြပါဦးလို့။ (သြော် ငါ့မလဲ ဒင်းတို့အကြောင်းမပါ စကားမပြောဘူး အဓိဌာန်ထားသလိုဖြစ်နေပြီ။ ရေးမိပြန်ပြီ။ တရှည်တလျား) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဦးအောင်ကြီး သရော်ထားတာ ဖတ်ပြီး ရီရလို့။
ခင်ဗျားတို့ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့က လုပ်သင့်တာကို လုပ်မှာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရပ်တည်ခဲ့သမျှ သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် လုပ်သင့်တာမှန်သမျှကို ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့အတွက် ပါချင်လည်းပါမယ်၊ မပါချင်လည်းမပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကြိုက်ရင် မဲပေး မကြိုက်ရင် မဲမပေးနဲ့။
ကျွန်တော်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၄၅ မိနစ်လောက် Lecture ရိုက်ခဲ့တယ်။ ဒေါ်စုကို ကျွန်တော် ဆုံးမ ခဲ့တယ်။ ဦးခင်မောင်ဆွေ တို့ကို ခမောက်ခိုးရာမှာ အားပေးကူညီလုပ်ခဲ့တယ် … အဲ .. ပါတီ ထောင်ပေးခဲ့တယ်။ ဦးသုဝေတို့ကို ပါတီထောင်ပေးခဲ့တယ်။ ပါးရိုက်တဲ့ ဦးအုန်းမြင့်ကို သိတယ်မဟုတ်လား? အဲဒီဦးအုန်းမြင့်နဲ့ ရင်းနှီးတော့ သူ့ကို ကျွန်တော်တို့ ဂျာနယ်တွေ သူ့ကိုရောင်းခဲ့ကြတယ်။ သူကလည်းအားပေးတယ်။ ဒလောက်ဆို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို သိရောပေါ့။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ သုခမိန်အဆင့်ရှိသူဆိုပေမယ့် ဘယ်တုန်းကမှ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်မနေခဲ့ဘူးဆိုတာလည်း မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ သိပြီးဖြစ်တယ်။
ဟန်နာဘိခ်ျ ကိုတောင် ဆိုက်ကားပြောင်းနင်းဖို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အကြံပေးခဲ့ဖူးတာကိုကြည့်ရင် ဧရာဝတီ တိုင်းက ဦးသိန်းအောင် ထက် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအမြင်ပိုမိုသာလွန်ကြောင်းတွေ့နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကြိုက်ရင် မဲပေး၊ မကြိုက်ရင် မဲမပေးနဲ့။
အဓိက အချက်အနေနဲ့ ပါတီလုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒေါင်းတစ်ကောင်ကို စတင်ခိုးပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ ဒီလို ခိုးပြတာကို မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတို့အပေါင်းတို့ ကြိုက်သည် ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ … ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆက်ခိုးသွားမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ခိုးတာကို ကြိုက်ရင် မဲပေး၊ မကြိုက်ရင် မဲပေးနဲ့။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအပေါ်မှာ အမှန်တရားဘက်ကပဲ တောက်လျှောက်ရပ်တည်လာခဲ့တဲ့အလျှောက် မှန်တယ်လို့ထင်သမျှကို ပြောဆို လှုပ်ရှားသွားမှာပဲဖြစ်တယ်။ သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်း အနာဂါတ်ကိုလည်း ယထာဘူတကျကျရှုမြင်ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ သိပ်မကြာခင်ကာလမှာ ရွေးကောက်ပွဲကြီးနဲ့ တွေ့ကြုံရတော့မှာဖြစ်တယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်။ ဒီ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကလည်း ဦးသန်းရွှေရဲ့ ဦးဆောင်မှုကြောင့် ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဦးသန်းရွှေဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုအပေါ်မှာ အများကြီး ကျေးဇူးရှိတယ်။ သူဟာ ကျေးဇူးရှင်ပဲ။ ကျွန်တော့အနေနဲ့ ဦးသန်းရွှေကို ဖျင်ခံပေးလို့ရရင်တောင်မှ ခံပေးချင်တယ်။ ဒီလောက်အထိ ကျေးဇူးတင်တယ်။ သမ္မတကြီးလည်း သဘာပတိလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီရွေးကောက်ပွဲက သမ္မတကြီးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ မကင်းဘူး။ သမ္မတကြီးကိုလည်း ကျွန်တော် ဖျင်ခံပြီး ပေးဆပ်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကို ကြိုက်ရင် မဲပေး၊ မကြိုက်ရင် မဲမပေးနဲ့။
ဦးသန်းရွှေ ကျေးဇူးကြောင့်သာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ကြက်ဆူပင်တွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ တင့်တယ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဦးသန်းရွှေသာ ဒီနိုင်ငံကို သေသေချာချာမကိုင်တွယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အခုဆိုရင် ကျုပ်တို့နိုင်ငံက ကျွန်းပင်တွေ အမှိုက်လိုပွပြီး နေလို့တောင်ကောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ သယံဇာတတွေ တောတောင်ရေမြေတွေနဲ့ စိတ်ပျက်စရာ အရိုင်းဆန်ဆန်ကြီး တည်ရှိနေလိမ့်မယ်။ အခုတော့ ရှင်းသင့်တဲ့တောင်တွေကိုလည်း ရှင်းသွားတယ်၊ ခုတ်သင့်တဲ့အပင်တွေကိုလည်း ခုတ်သွားတယ်။ မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ ဦးသန်းရွှေဟာ ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေ ကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်။ ဦးသန်းရွှေသာ လက်ခံမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်ကတော့ ဖျင်ခံမှာပဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကို ကြိုက်ရင် မဲပေး၊ မကြိုက်ရင် မဲမပေးနဲ့။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို ဘယ်သူမှ မစော်ကားနိုင်ဖို့အတွက် စစ်ရေးအင်အား ပြည့်ဝနေဖို့လိုတယ်။ ဦးသန်းရွှေ ရဲ့ မူအတိုင်းဆက်သွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် တပ်မတော်ဟာ စည်ပင်ထွန်းကားလာခဲ့တာ အခုဆိုရင် လောက်ကိုင်မှာ ခြင်းကြားတပ်မတော်ဟာ နာမည်အရမ်းကြီးပြီး သောက်သောက်လဲ သေ … အဲ သောက်သောက်လဲ အောင်မြင်ခဲ့တာ အားလုံးအမြင်ပဲဖြစ်တယ်။ စစ်အင်အားကို တိုးချဲ့ဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ခံယူတယ်။ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်တွေကို ကြီးမားတဲ့ စစ်အင်အားနဲ့နှိမ်နင်းလိုက်ရင် စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေ အားလုံးကိစ္စတုံးကုန်ကြမှာဖြစ်တယ်။ ဒါမှ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် လုံးဝ(လုံးဝ) မရှိတဲ့နိုင်ငံအဖြစ် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ရပ်တည်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ အခွင့်အရေးတောင်းဆိုတာကလည်း တိုင်းရင်းသားတွေကို အရောဝင်ပြီး အရာပေးနေလို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကြီးမားတဲ့ စစ်အင်အားကို ဖန်တီး တိုးချဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို အပျောက်ရှင်းလိုက်ရင် လုံးဝ ငြိမ်းချမ်းရေး ရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ ဒါကြောင့် စစ်အင်အားကို တိုးချဲ့ဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အသည်းထဲက ယုံကြည်တယ်။ ဖာသည်တွေ ပေါတာ နောက်မှရှင်းမယ်၊ အိမ်ဖော်တွေ ပြည်ပထွက်တာ နောက်မှရှင်းမယ်၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံသားအရေး၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ၊ ပညာရေး စတာတွေဟာ စစ်အင်အားတိုးချဲ့ရေးလောက်ဘာမှ အရေးမကြီးဘူး။ စစ်အင်အား နည်းနေလို့သာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး နိမ့်ကျနေရတာဖြစ်တယ်။ စစ်အင်အားတိုးချဲ့ခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားရေး ဦးတည်ချက်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့ စစ်အင်အားကို တရုတ်ပြည်က အဟောင်းတွေ ဝယ်ပြီး အမေရိကန်ထက်သာအောင်တိုးချဲ့မယ်။ ဒါကြောင့် ကြိုက်ရင် မဲပေး၊ မကြိုက်ရင် မဲမပေးနဲ့။
တစ်ဆက်တည်းဗျာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကို ရင်ထဲစွဲနေအောင်မှတ်ထားကြပါ။
“ဒေါင်းခိုးပြီးပြီ ဒို့ပါတီ ခပ်တည်တည်ရှေ့ချီ
ခိုးမှ အဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်တာ ကျွန်တော်တို့ပါတီဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ကြိုက်ရင် မဲပေး၊ မကြိုက်ရင် မဲမပေးနဲ့။
မြစပဲရိုး says: သများ ကြောက်ကြောက်။
အဲဒီလူ ပြောတာ ကို နားထောင်ကြည့်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောမှာတွေ ကို တန်ပြန်ဖျက်ထားတာ တွေ ဖြစ်နေတာ သတိထားလိုက်မိတယ်။
ပြောမဲ့ မိန့်ခွန်း ကို ဆင်ဆာတင်ရပြီး အဲဒါကို လျှို့ဝှက်ရမဲ့ ကျင့်ဝင့် ကို ဖောက်ခဲ့ သူ တွေ ကို အရေးမလုပ်တော့ပါဘူး။
မင်းသမီး ကို ပိုပြီးတင့်တယ်စေဖို့ ဇာတ်ပို့ပေးတဲ့ လူကြမ်းတွေ ဆိုပြီးသာ ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်။
မတရားမှုကြီး ကို ကျွန်မ တို့ မြင်နေလဲ ဘာလုပ်လို့ ရနိုင်ဦးမှာလဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဆိုတဲ့လူက အလံလည်းအတုခိုးသေးတယ် ပြောလိုက်တဲ့စကားက အောက်တန်းကျလိုက်တာ ဆိုတာ။
Mr. MarGa says: ဘယ်အချိန်ထိ တင်ထားမယ်တော့ မသိဘူး
ကထူးဆန်း says: တစ်နိုင်ငံလုံးသိအောင် ပြောရမှာက ဒေါ်အောင်ဆနုးစုကြည် သူ့မဲဆွယ်သွား နတ်စင်ကုန်းကျေးရွာ လမ်းမှာပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲ က စကား
မကြောက်ဖို့ ။ လျှို့ ဝှက်မဲ ပေးတာမို့ ဘယ်သူ့ကိုပေးတယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ကြောင်းနဲ့ ခြိမ်ခြောက်လို့ကောင်းလို့
ခြိမ်းခြောက် နေတာ ဆိုတဲ့ စကား ။။
အဲ့ဒီ့ စကား တောနေ လူထု ဆီ ကောင်းကောင်းပြန့်ဖိုလိုတယ် …
ခြေဥ တုံးက ဟိုတယ်မန်နေဂျာ အဆင့် ရှိတဲ့ လူတောင် ကြောက်လို့ ထောက်ခံမဲ ထဲ့ခဲ့တယ်ဆိုတာ
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ကြား ခဲ့တာ .. NLD အမတ်လောင်းတွေ ရောက်လေရာ မှာ ပြောပြသင့်တယ်
မြစပဲရိုး says: . မြို့ကြီးပေါ်မှာလဲ ကိုယ့်ဟာကို အဆင်ပြေနေတဲ့ လူတန်စားထဲ အများစုက အပြောင်းအလဲ ကို ကြောက်နေကြပါတယ်။
အစိုးရအသစ် မှာ တစ် က ပြန်စ ရမှာ ကြောက်လို့ တဲ့။
ကျွန်မလဲ သူတို့ နေရာမှာ ဆို ဒီလောက် ရဲရဲတောက် နေမယ် မထင်ပါဘူး ကထူးဆန်းရယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်မ တို့ လို self interest လွတ်နေတဲ့ သူတွေ က နဲနဲပို အားစိုက်တွန်းဖို့ လိုတယ် ထင်မိလို့ပါ။
ကျွန်မ အမြင်မှာတော့ အစိုးရ နဲ့ လက်ဝါးချင်ရိုက်ပြီး မဟုတ်တာ လုပ်နေသူများ ကတော့ ကြောက်သင့်ပါတယ်။
(ဒါကြောင့်လဲ အသေအလဲ ကြောက်ကန်ကန် နေကြတာပေါ့)
ကျန်တဲ့ ကိုယ့်အစွမ်းအစ နဲ့ လုပ်နေနိုင်သူ တွေကတော့ ပိုပြီး ကောင်းတဲ့အခြေအနေကို ပြောင်းသွားမှာလို့ ကျွန်မတော့ ယုံတာပါဘဲ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ခိုနီဒုံ ခိုပြာဒုံ ခိုဝါဒုံ ခိုစိမ်းဒုံဂျီး ဘယ်ဖက်ကို မဲထည့်မည်လဲ သိခြင်စမ်းပ…